Real Madrid oo ku Guuleysatay Koobkii seddaxaad oo Xariir ah tartanka Champions League kadib guul aysan ku Dhibtoon oo ay ka Gareen Liverpool+SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo ku Guuleysatay Koobkii seddaxaad oo Xariir ah tartanka Champions League kadib guul aysan ku Dhibtoon oo ay ka Gareen Liverpool+SAWIRRO
CR Shariif May 26, 2018
( Kiev ) 26 Maajo 2018. Real Madrid ayaa hanatay koobka Champions League markii seddaxaad oo xariir ah kadib markii ay guul kagareen dhigooda Liverpool cayaar ku dhamaatay 3-1.
Qeybta kowaad cayaarta ayaa lagu kana nastay 0-0.
Kooxda Liverpool waxay soo bandhigay cayaar sareysa daqiiqadii hore ee kulanka iyagoo sameyay isku dayo dhawr ah laakiin ma suura galin inay wax gool ah helaan.
Fursadii ugu fiicneed ayaa laga badbaadiyay daafaca Liverpool ee Trent Alexander-Arnold kasoo darbad xoogan goolka turuuray taaso aheyd mid markii hore uu ka hor istaagay Rasom laacibka Firnimo.
Real Madrid aad ayay u yareen fursadahooda qeybta hore inkastoo laga diiday gool dhamaadka kaambiyaha kowaad markii kubbad uu madaxeyay Cristiano Ronaldo taasoo uu badbaadiyay goolhayaha Liverpool misena uu goolka ku dhameystiray Karim Benzema.
Qeybta dambe cayaarta ayaa dib u bilaabatay iyadoo Real Madrid ay dardar xoogan kusoo gashay waxan furay halis ah birta ku dhiftay xiddiga Isco.
Balse daqiiqadii 51-aad waxaa dhashay goolka kowaad ee cayaarta kadib kubbad uu baaso ilahaa goolhayaha Liverpool laakiin waxaa lug u dhigay karim Banzema oo sidaas hogaanka ugu dhiibay Real Madrid.
Wax badan siima heyn hogaanka kooxda Real markii ay Liverpool heshay barbarha goolka waxaa dhaliyay Sedo Mane kasoo dhameystiray Kubbad uu soo Madaxeyay daafaca Dejan Lovren oo koorno aheyd.
Jawi cayaarta ayaa mar qura isbadal markii uu dhabal ku dhaliyay goolka labaad ee cayaarta wiilka badalka ugu soo galay Real Marid ee Gareth Bale kasoo ka kulmay diib uu soo dhigay Marcelo daqiiqadii 64-aad.
Liverpool ayaa isku dayday inay soo barbare goolka lagu hogaaminayay balse daafaca adage e Real Madrid ayaa sameysay difaacshao fiican.
Balse waxa rajo dilay kooxda England laacibka Gareth Bale oo darbad xoogan goolka ku tuuray taaso ka fara baxsatay goolhaya Reds Loris Karius daqiiqadii 83-aad hogaankana kaga dhigay kooxdiisa Madrid 3-1,cayaarta ayaa kusoo idlaatay natiijadaas.
Guusha Los Blancos ayay ka dhigan tahay inay qaadeen tartankan markii 13-aad iyadoo noqday kooxdii u horeysay tan iyo Bayern Munich ee seddax sano xariir ah ku guuleystaa koobka Champions League.
DEG DEG: Mohamed Salah oo seegaya koobka adduunka!
Maxaa Laga Bartay Cayaartii Finalka ee Rael Madrid iyo Liverpool